FBC - Ministeerri Eegumsa Fayyaa waliigaltee tajaajila ispeeshiyaalayizeeshinii babal’isuu Mootummaa Ispeen waliin walii mallatteesse
Ministeerri Eegumsa Fayyaa waliigaltee tajaajila ispeeshiyaalayizeeshinii babal’isuu Mootummaa Ispeen waliin walii mallatteesse
Finfinnee, Caamsaa 30, 2010 (FBC) Ministeerri Eegumsa Fayyaa tajaajila ‘ispeshiyaalayizeeshinii’ babal’isuuf mootummaa Ispeen waliin waliigaltee mallatteesse.
Waajjirri ministeerichaa deggarsa argateen tajaajila ‘ispeeshiyaalaayizeeshinii meedikaalaa’ akaakuusaan haaraa ta’e yuunivarsitiiwwan hunda keessatti babal’isuu akka gargaaru Ministirri Eegumsa Fayyaa fi Itiyoophiyaatti Ambaasaaddarri Mootummaa Ispeen ibsa waliin kennan irraa baruun danda’ameera.
Ministirri Eegumsa Fayyaa Doktar Amiir Amaan akka himanitti Itiyoophiyaan waggoota darbanitti ispeshiyaalayizeeshinii meedikaalaa irratti hojilee hedduu waan hojjatteef milkaa’ina galmeessisuu ishee ibsanii, deggarsichis wal’aansa baqaqsanii wal’aanuu, wal’aansa gadameessaa fi dhibee keessaa irratti xiyyeeffatee akka hojjatu ibsaniiru.
Itiyoophiyaatti Ambaasaadara Mootummaa Ispeen kan ta’an Boorjaa Montisiinoo gama isaaniin Itiyoophiyaan hojilee waggoota darbanitti raawwatteen bu’aa Sagantaa Meedikaal Ispeeshiyaalayizeeshiniin galmeessifte dinqisiifatanii, waliigalteen amma mallatteeffames ispeeshiyaalayizeeshinii wal’aansa baqasanii wal’aanuu, wal’aansa daa’immanii, gadameessa fi dhibee keessaa irratti hojii bu’a qabeessa raawwachuuf akka garagaaru ibsaniiru; mootummaan isaaniis deggarsa wal-fakkaataa kennuu cimsee akka itti-fufu himaniiru.
Oduuwwan Biroo « Wallaansi jijjiirraa gadaamessaa Briitaaniyaatti laatamuufi	Dubartiin tokko wal’aansa haaraan kaansarii harmaa, qaama keessa faca’e, irraa bayyaannatte »